मलेसिया प्रस्थान गर्‍यो नेपाली क्रिकेट टोली
नेकपाको सेती महाकाली ब्युरोकाे संयुक्त बैठक सम्पन्न
भारतीय बालक अपहरण गरी फिरौती बुझ्ने फोरमका नेता पक्राउ
१३ वर्षीय बालिकाले साढे तीन किलोको स्वस्थ्य छोरा जन्माइन, प्रेमी जेलमा
भारतीय जंगलमा पुगेका गैडालाई नेपाल फर्काउन एसएसबीले दिएन
पासो थाप्दै गरेका शिकारी थलामै पक्राउ
बोक्सीको आरोपमा बालिकामाथि निर्घात कुटपिट (हेर्नुस भिडियो)
ग्रेटर नेपालका अभियन्ता नेपाल जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाण्डौबिरुद्ध अदालत जाने
बस र स्कार्पियो ठोक्किँदा बेहुलाका बाबुआमासहित ६ को मृत्यु
भारतीय नेताको जनकपुरमोह ! दुई वर्षका तीन प्रमुख भ्रमण
कक्षा–कक्षामै पुगे सांसद, दंग परे विद्यार्थी !
सन् २०२० मा अष्ट्रेलियामा हुने टी– २० विश्वकप क्रिकेटको पहिलो चरणको छनोट प्रतियोगितामा सहभागी हुन नेपाली टोली सोमबार मलेसिया प्रस्थान गरेको छ ।
असोज १७ देखि २६ सम्म मलेसियामा हुने प्रतियोगितामा नेपालसहित सिङ्गापुर, मलेसिया, भुटान, चीन, म्यानमा र थाइल्याण्ड सहभागी हुनेछन् । राउण्ड रोविनका आधारमा हुने प्रतिस्पर्धाबाट शीर्ष तीन टोली दोस्रो चरणको छनोटमा छानिनेछन् ।
यसअघि एशियाको पश्चिम क्षेत्रीय छनोटबाट यूएर्इ, कतार र कुवेत दोस्रो चरणमा प्रवेश गरिसकेका छन् । दोस्रो चरणमा यूएर्इ, कतार र कुवेतसँगै पूर्व क्षेत्रबाट छनोट हुने तीन टोली गरी छ टोलीबीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ । छ टोलीबीचको प्रतिस्पर्धाबाट दुई टोली अन्तिम चरणका लागि छनोट हुनेछन् । अन्तिम चरणमा विश्वभरबाट छानिएका १४ टोलीबीच प्रतिस्पर्धा हुने र १४ मध्ये ६ टोली टी–२० विश्वकप २०२० का लागि छनोट हुनेछन् ।
प्रस्थान गर्ने खेलाडीमा कप्तान पारस खड्का, अनिलकुमार साह, वसन्त रेग्मी, विनोद भण्डारी, दीपेन्द्रसिंह ऐरी, ज्ञानेन्द्र मल्ल, करण केसी, ललित भण्डारी, ललित राजवंशी, आरिफ शेख, प्रदीप ऐरी, सन्दीप लामिछाने, शरद भेषवाकर, सोमपाल कामी तथा वैकल्पिक खेलाडीमा सुनिल धमला, सहाब अलाम, दीपेश श्रेष्ठ र सागर पुन रहेको नेपाली टोलीका टोली व्यवस्थापक रमन शिवाकोटीले जानकारी दिएका छन् ।
नेपाली टोलीका मुख्य प्रशिक्षकमा जगत टमाटा र फिजियोमा दिनेश भट्ट तथा व्यवस्थापकमा रमन छन् । छनोट प्रतियोगिताअन्तर्गत नेपालले असोज १७ मा म्यान्मा, २० मा मलेसिया, २१ मा थाइल्याण्ड, २३ मा भुटान, २४ मा चीन र २६ सिङ्गापुरसँग खेल्नेछ ।
Credit : newskoseli.com
Posted on October 2, 2018 Author Categories खेलकुद
Previous Previous post: पन्ध्र दिनअघि नै एयरलाइन्स भन्छन् दशैंको बुकिङ सकियो
Next Next post: राष्ट्रिय जनता दल बिलय भयो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमा
Powered by Sanil.com.np